Raikitra ny fifampitifirana teny Marais Masay: jiolahy telo mpanao fanafihana mahery vaika telo lavon’ny polisy | NewsMada
Raikitra ny fifampitifirana teny Marais Masay: jiolahy telo mpanao fanafihana mahery vaika telo lavon’ny polisy
Fantatra tamin’ny tatitra nataon’ny polisy fa jiolahy efa mpanao fanafihana mahery vaika teto an-drenivohitra ireto maty voatifitra, tetsy Marais Masay, omaly antoandro ireto. Nikasa hanafika mpandraharaha iray teny Analamahitsy izy ireo no izao nifanehatra tamin’ny polisy izao.
Jiolahy telo lahy saika hanao fanafihana teny Analamahitsy, tra-tehaky ny polisy, omaly antoandro teny Masay, tokony ho tamin’ny 01 ora. « Fantatra fa omaly izy ireo no hanatanteraka izany fanafihana izany ka teo Masay no nikononkonona izany », hoy ny fanazavan’ny polisim-pirenena, loharanom-baovao, omaly. Nambaran’izy ireo fa mpandraharaha iray eny Analamahitsy no saika hotafihina. Vao naheno ny loharanom-baovao momba izany anefa ireo polisy avy ao amin’ny kaomisarian’ny boriborintany faharoa sy ny avy ao amin’ny BC 4, avy hatrany dia namonjy teny an-toerana. Tonga ara-potoana ireo mpitandro filaminana ka voasakana ny teti-dratsin’ireo jiolahy. Raikitra, araka izany, ny fifampitifirana teo amin’ny roa tonta. Fantatra mantsy fa nandrangaranga basy maherivaika (Kalachnikov sy basy poleta) ireto jiolahy.
Loharanom-baovao iray hafa kosa nilaza fa nisy nanao aroloha (casque) ireo jiolahy tamin’izany. « Tsy nitsitsy azy ireo ihany koa ny polisy fa mba niaro ny ainy ka namaly ny tifitra nataon’ireo jiolahy », hoy hatrany ny fanamafisan’ny loharanom-baovao ny fanazavany. Naharitra manodidina ny 15 minitra ny tifitra teo amin’ny polisy sy ireo jiolahy. Vokany, lavon’ny balan’ny mpitandro fiilaminana ny telo tamin’ireo olon-dratsy. Nisy tamin’izy ireo no voatifitra teo amin’ny kibony, raha voa teo amin’ny loha kosa ny hafa. Nambaran’ireo tompon’andraikitra eny anivon’ny tranom-paty etsy amin’ny HJRA fa voatifitra teo amin’ny lohany tao anaty aroloha ny olon-dratsy iray ka vaky tanteraka ilay aroloha.
Tafaporitsaka ny iray
Nandritra izany, tafaporitsaka ny naman’ireo jiolahy iray, izay mbola karohina fatratra, ankehitriny. Tratra teny amin’ireo lavo kosa ny basy mahery vaika niaraka tamina bala 20 isa izay nafenin’ireto jiolahy tao anaty kitapo, talohan’ny fifampitifirana. Nohamafisin’ny polisim-pirenena fa isan’ireo mpanao fanafihana mahery vaika eto an-drenivohitra ireo jiolahy lavo ireo. Toy ny tranga izay niseho teny Besarety, Itaosy. Isan’izany koa ny fanafihana cash point nisesisesy.
Hatramin’ny ora nanoratanay farany, mbola tao amin’ny tranom-patin’ny hopitalin’Ampefiloha ireo vata-mangatsiakan’ireo olon-dratsy.